Phinda ufumane indawo kwi-iPhone yakho ngobuqhinga bokuqamba! | IPhone iindaba
Icebo elitsha likunceda ekubuyiseni indawo xa uphantsi kwi-iPhone yakho
UJuan Colilla | | IPhone iindaba, Izaziso, Ezahlukeneyo
Iqhinga elivela kuReddit elithembisa ukujikeleza kumnatha kwezi ntsuku khulula indawo kwi-iPhone yethu xa siphelelwa yiyo, iqhinga lithe kratya kwaye alazi nto kuba liza kwenza ukuba inkqubo yokusebenza ingafumaneki kumsebenzisi ukuze isebenze ngesandla.
Eli qhinga liluncedo kakhulu ngakumbi kwabo banesixhobo se-16GB, kuba bathambekele ekuphelelwe yindawo ngaphambi kokunye, kwaye iya kwenza I-iPhone ngokwayo icoca "iifayile ze-junk" zayo okanye i-cache yezicelo ezingenamsebenzi okanye ezingabalulekanga, ngale ndlela sinokufumana kwakhona indawo encinci ye-GB.
Icebo lilula kakhulu kwaye liqulathe ukukopela inkqubo, koku kufuneka sizame ukurenta imuvi ethatha indawo engaphezulu kunaleyo sinayo, umzekelo INkosi yeeRandi: IiTowers ezimbini o UMars (uMartian) ehlala malunga ne-6GB kuhlobo lwayo olupheleleyo lwe -HD.
Nje ukuba kwenziwe oku, kwaye kuba asinandawo yaneleyo, inkqubo iya kubonisa umyalezo ocebisa ukuba asinandawo yokugcwalisa inkqubo, kwaye irente ayizukwenziwa.
Emva koko, inkqubo yokucoca iya kuqala ukusebenza kwaye iya kuqala ukukhupha ezinye ii-cache ukuzama ukubuyisa indawo.
Le ayisiyonto intsha, yinxalenye yeendaba esele zivele kudala, ndingathi ukusukela nge-iOS 5, kwaye iyinxalenye yesiganeko esingaqhelekanga apho ezinye ii -apps zenethiwekhi yoluntu (ezinje nge-Facebook, ngakumbi le), walitshintsha igama le icon yakho waba ngu "Ukucoca ..." kwaye azinakuvulwa ngexesha lenkqubo, ayizizo iintsomi zasedolophini, iyenzeka ngenene nangona kunzima kakhulu ukuyibona, kwaye ngakumbi ngoku xa iitshipsi zokugcina izixhobo zethu zikhawuleza kangangokuba ukucinywa kwenziwe kwimizuzwana nje .
Inkqubo inokuphindaphindwa amaxesha amaninzi njengoko unqwenela, ngalo lonke ixesha kuzanywa ukukhuphela ifayile enkulu kunendawo esele ikhona kwisixhobo sethu.
Ngaphambili bekukho isicelo kwiAppStore eyayisithi icoca ii-cache zesixhobo sethu, kwaye ibiyintoni kanye kanye gcwalisa indawo yasimahla ngedatha engahleliwe kwada akwabikho ndawo ishiyekileyo, emva koko i-iOS isebenzise le ndlela yokuzicoca kwaye le nkqubo yona yayiyeyona izicoceyo, yinto eyaziwayo ngabantu abambalwa, ndade ndathetha ngayo kwabo bajongene ne-AVG kwi-Mobile World Congress edlulileyo emva kokuba bendixelele ukuba balungiselela isicelo sokucoca i-iPhone.
Ngelishwa kubonakala ngathi U-Apple akazivumeli ezi ntlobo zezenzo kwisicelo ngaphakathi kwivenkile yakho, inokuba kungenxa yokuba ngokungangqalanga iphazamisa ulwazi olugcinwe ngabanye ngokususa iifayile, into endikholelwa ukuba iyaphula imigaqo yeVenkile ye App.
Ngolunye uhlobo, yinkqubo esebenzayo kwaye isetyenziswe ziinkqubo ezininzi kunye neenkqubo, njengoko isasetyenziswa yinkqubo yokucoca iMyfone, Inkqubo yeWindows kunye ne-OS X yokuba phakathi kwemisebenzi yayo enye yazo ibhala ifayile ezalisa imemori yesixhobo ngolwazi olungahleliwe de ibe ijongene nokucoca ii-cache zayo.
Ukuba ukhe wayizama, sixelele, ingaba ikusebenzele?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » IPhone iindaba » Icebo elitsha likunceda ekubuyiseni indawo xa uphantsi kwi-iPhone yakho
Kuyamangalisa ,, enkosi, ukusuka kwi-1.8 gb inyuke yaya ku-4.4. Ndathi xa ndivula iphone yam ndabona ngokucacileyo i-safari, i-facebook kunye nezinye iiapps, abathi bazicoca ...
Enkosi kuwe ngokusixelela ngamava akho, kuhlala kumnandi ukukunceda 😀
Ndiyenzile kwaye ilayibrari yam yomculo icinyiwe
Ndiqinisekisile ukuba akukho nto yenzekayo.
Ndiqinisekisile ukuba imovie ibethelelwe kuwe
Okona kulungileyo yi-jailbreak nge-icleaner
Ndikwenza oko ukucoca ngoGqirha weBhetri ngaphandle komngcipheko wokulayisha imovie ngaphandle kokuqhekeka kwejele okomzuzwana
Ndisebenzisa uGqirha weBhetri kwaye isebenza kakuhle, kuba ndisebenzise eli qhinga kwaye andifumananga sibonelelo. Ukubulisa.
Iyasebenza, ukusuka kwi-2,5 ukuya kwi-4,5 kwaye ngaphandle kokuhlawuliswa i-movie
UDario Jimenez sitsho
Igqibelele ndiyenzile kwaye ukuba iyasebenza, ndiyibonile kwenye iwebhusayithi kwaye iyasebenza ndiyifumene ngokuyiphinda-phinda ama-4 amaxesha i-1,3 GB yendawo kwaye ukuza kuthi ga ngoku ndijonge kuyo yonke indawo kwaye ndinayo yonke idatha yam.
Phendula Dario Jimenez
Bonke ubuxoki, ndoda!
Ukuba iyasebenza, ndine-iPhone 4S kwaye xa ndiyenza le nkqubo ndaye ndaya kwi-2.2Gb kwi-iPhone yam. ukuya ku-7.1Gb. Qaphela ukuba phantsi kwezicelo ezithile igama liphume licoca ... Inani lendawo ekhululweyo iya kulingana ngokulinganayo kuyo yonke i-cache ekwisixhobo, kwezinye kuya kuba kakhulu kwaye kwezinye kancinci. Ukubulisa
Kukhangelwe kwaye iyasebenza ukusuka ekubeni ne-1.3 ukuya kwi-3.2 gb ngaphandle kokuba i-movie ilayishwe. Enkosi 🙂
Mkhulu, isebenze kakuhle kum. Enkosi kakhulu bafo!
UCesitar Alvarado sitsho
Andizange ndiphawule apha, kodwa iyasebenza, ngomzuzu ndiye ndasuka kwi-4.4gb ndaya kwi-5.8gb ekhoyo, iqhinga elihle kakhulu!
Phendula Cesitar Alvarado
Ndizuze igig ngokwenza le nkqubo, enkosi!
Kusebenze kakuhle kum, ndahamba ukusuka kwi-2gb ndaya ku-6.2gb emva kwemizamo emi-2 yokurenta imovie, andikholelwa ukuba ndinenkunkuma eninzi yokuyicoca. Ndacima kwaye kwiselfowuni ukungqinisisa isimanga kunye nendawo yasimahla igcinwe ngaphandle kwengxaki.
xolela ukungazi kwam, ndibengumlandeli wakho iminyaka ethile kodwa ukusuka apho kufuneka uyenze khona le nkqubo kuba andinakuyenza.
Ivela kwi-Iphone okanye kwi-Itunes.
Ukusuka kwiitunes. Ujonge imovie "iZakhiwo eziBini" kwaye uzama ukuyirenta.
Molo, kuyinyani okuqinisekisiweyo kuyasebenza ekubeni i-169mb iye kwi-1,5gb enkosi
Ndizamile. Kuyinyani ngokupheleleyo. Uvavanywe kwi-iPhone 6 nge-9.3.1. Ukusuka kwi-730mb ndiye kwi-1.8gb ngokuyenza kabini.
Uyabona umbhalo "Ukucoca" kwizicelo ezihlambululayo. Kucacile kwi-media media app: i-whatsapp, i-twitter, i-linkedin ... ngalo lonke ixesha usenza iqhinga lokucoca i-app eyahlukileyo.
Andinalo ikhadi lamatyala elinxulunyaniswa neakhawunti yam, ngenxa yoko bekungenakwenzeka ukuba babize nantoni na.
Molo, kufuneka ndiye phi okanye ndiyibukele phi imovie?
Ewe, akukho nto yenzekileyo kum .. Ndisenama-991 Mb simahla: ((
Yakha eyakho iOculus Rift ngeVR Iseti yentloko, i-iPhone yakho kunye neKinoVR
Iapile ikhupha iiVidiyo zeAustism kusuku lwayo lwehlabathi